रसिया विश्वकपमा कस्ले कुन उपाधि जिते ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV रसिया विश्वकपमा कस्ले कुन उपाधि जिते ? | Sagarmatha TV
काठमाडाैं । फुटबलको महामेला विश्वकप, खेलाडीका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका अझ फराकिलो बनाउने माध्यम पनि हो । जहां प्रत्येक खेलाडीको व्यक्तिगत प्रदर्शनले नयाँ उचाईको अवसर पाएको हुन्छ । रूसमा सम्पन्न २१ औ संस्करणको विश्वकपले पनि केही खेलाडीको प्रर्दशनलाई उचाईमा पु¥याएको छ । उत्कृष्ट प्रदर्शनकै कारण विविभन्न विधाबाट उनीहरु व्यक्तिगत उपाधि हात पार्न सफल भएका छन् ।
विश्वकप फुटबलको महाकुम्भ, जति टोलीका लागि अर्थपूर्ण छ खेलाडीका लागि पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । विश्वकपमा विभिन्न विधामा खेलाडीले पाउने व्यक्तिगत उपाधीले खेलाडीको जिवनमा धेरै महत्व राख्छ । यही मेसोमा रूसमा सम्पन्न २१ औ संस्करणको विश्वकपमा पनि विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई पनि उपाधी प्रदान गरिएको छ ।
जसमध्ये फाइनलमा फ्रान्ससँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको क्रोएसिया कप्तान लुका मोडरिचले विश्वकप २०१८ को गोल्डेन बल अवार्ड जितेका हुन् । क्रोएसियालाई पहिलो पटक फाइनल पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनले रूस विश्वकपमा उत्कृष्ट खेलाडी हुँदै गोल्डेन बल जितेका हुन् ।
आयोजक रूसविरुद्धको उनको प्रदर्शन प्रशंसनीय रह्यो । उनले तीन खेलमा म्यान अफ दी म्याच अवार्ड जित्न पनि सफल भएका थिए । लुका मोड्रिचको उच्च प्रर्दशन र कप्तानीका कारण क्रोएसिया रूस विश्वकपमा फाईनलसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएको थियो ।
त्यस्तै तेस्रो भएको बेल्जियमको एडेन हाजार्डले शिल्भर बल तथा फ्रान्सका एन्टोनी ग्रीजमनले ब्रोन्ज बल जितेका छन् । रूस विश्वकपमा हाजार्डको कप्तानीमा रहेकोे बेल्यिमको गोल्डेन जेनेरेशनवाट राम्रो प्रर्दशन भएको थियो । हाजार्डले बेल्जियमलाई विश्वकपमा तेश्रो स्थान सम्म पु¥याएका थिए ।
प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्ताले पाउने गोल्डेन बलको अवार्ड भने इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केनले हात पारेका छन् । रूस विश्वकपमा सर्वाधिक ६ गर्दै कप्तान केनले गोल्डेन बुट जित्न सफल भएका हुन् । राम्रो खेल प्रर्दशन गरे पनि फाइनल पुग्न असफल बनेको इंग्ल्यान्डका कप्तान केनले भने गोल्डेन बुट हात पर्दै इग्ल्याण्डलाई खुशी दिलाए । ४ गोल गर्नुका साथै २ एसिस्ट गरेका ग्रीजमनले सिल्भर बुट तथा ४ गोल र एक असिस्ट गरेका बेल्जियमका रोमेलु लुकाकुले ब्रोन्ज बुट जिते ।
दाश्रो पटक विश्वच्याम्पियन बन्न सफल भएको फ्रान्सका युवा स्टार किलिएन एम्बाप्पेले बेस्ट योङ प्लेअरको अवार्ड जितेका छन् । उनी विश्वकपको फाइनलमा गोल गर्ने पेलेपछि पहिलो टिनएजर प्लेअर बनेका छन् ।
यस विश्वकपमा एमबाप्पेले कुल ४ गोल गरे जसमा फाइनलको एक गोल पनि समावेश छ । बेल्जियमका गोलकिपर थिबो कोर्टुवाले प्रतियोगिताको उत्कृष्ट गोलकिपरको उपाधि जित्न सफल भए । फिफा फेयर प्ले ट्रफिको उपाधि भने स्पेनले हात पारेकोे छ ।